Home Wararka Dacwada dilka Ikram oo la damiyay & rajo la’aan la soo daristay...
Dacwada dilka Ikram oo la damiyay & rajo la’aan la soo daristay qoyska Ikram
Dad badan ayaa is-weydiinaya maxaa hor taagan in la bilaabo maxkamadeynta dadka lagu tuhmayo dilka Ikraan Tahliil? Halkeey ku danbeeysay balanqaadkii iyo dhaartii Ra’iisal Wasaare oo ahayd inuusan harsanaynin ilamaa uu cadaalad u helo qoyska ay ka dhalatay Ikram Tahliil? Maxaa keenay in durabdiiba kiiska dacwada uusan Ra’iisal Wasaare Rooble ka hadlin?
Sida uu sheegay Ganaraal Abdalla Abdalla oo ah taliye ku xigeenkii hore ee hay’adda NISA, Hay’adaha garsoorka Soomaaliya ayaa wajahaya cadaadis ku saabsan in ay si deg-deg ah u bilaabaan geedi-socodka cadaalad u raadinta iyo maxkamadeynta kiiska Ikraan Tahliil Faarax xilli wali hogaanka dalka uu ku kala qeybsan yahay mareynta qadiyaddan.
Dhanka kale, Qaylo-dhaanan ayaa ka imaanaysa qoyska haweenaydan ka tirsaneyd hay’adda sirdoonka qaranka, xubnaha mucaaradka iyo saraakiil ciidan kuwaas oo aaminsan in muhiim ay tahay in cadaaladda u helida Ikraan ay laf-dhabar u tahay geedi-socodka dowladanimadda Soomaaliya.
Jeneraal Cabdalla Cabdalla oo soo noqdey taliye ku xigeenka hay’adda mukhaabaraadka qaranka ayaa kamid ah dadka aaminsan in Ikraan ay sababsatay in ay wax ka og-tahay dilkii Eng Yariisow. “Kiiska AUN Yariisow maahayn mid yar F&F [Farmaajo iyo Fahad] agtoodana waa mid Ku weyn oo mustaqbalkooda ayuu saamayn Ku leeyahay!,” ayuu ku qoray ciwaankiisa gaarka ah ee mareegga Facebook-ga.
Waxa jiro dareen guud oo sheegaya in Ra’iisal Wasaare Rooble lagu qanciyay in uu ka haro kiiska dacwada Ikram Tahliil. Rooble ayaa cadaadiska kaga yimid madaxweyne Qoor-Qoor oo xiriri hoose la leh Farmaajo. Waxaana hada muuqata in si farsameysan loo shuuqinayo kiisk dacwada Ikram.
Madaxweynaha muddo xileedkiisu dhamaadey Farmaajo ayaa lagu eedeeyay in uu gabaad-siinayo eedeysaneyaasha kiiskan oo ah agaasimaha hay’ada sirdoonka qaranka, Fahad Yaasiin, Kulane-jiis iyo Yaasiin Farey. Qaali Maxamed Guhaad, oo ah hooyadda Ikraan, ayaa todobaadkan waxay cod dheer uga dalbatay Farmaajo in uusan siyaasadeyn kiiskan “iigana soo saaro gabadheyda meesha ay ku jirto ee uu ogyahay”.
“Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaan leeyahay arrinta gabadheyda ha siyaasadeyn. Gabadheyda maanta hadaad hayso berry ma haysaneysid. Waxaan leeyahay maalinta qiyaamo waa lagu su’aalayaa adiga oo taagyar gabadheyda iiga soo saar meesha ay ku jirto oo aad og-tahay,” ayay tiri.
Jeneraal Cabdalla Cabdalla ayaa rumeysan in horumar kasta oo laga sameeyo kiiska Eng Yariisow uu fure u noqon doono in la ogaado xaalado kale oo ku gedaaman qadiyadda Ikraan iyo kuwa kale. “Hadii aysan maxkamadu kiiskaas hormar ka samayn kiisaska kale ee la xariira oo kan Ikraan ka mid yahay wax hormar lagama gaari doono. Furaha Baarista dilalka Saraakiisha NISA waa in laga soo bilaabo Dilkii Eng Yarisow,” ayuu kusoo gabagabeeyay hadalkiisa.
Ehelka Ikraan ayaa horay dacwada ugu gudbiyey maxkamada ciidamadda oo aan wali war rasmi ah kasoo saarin arrintan. Dad badan waxay aaminsan yihiin in qadiyadan ay tahay tijaabo hortaala madax-banaanida hay’adaha garsoorka Soomaaliya.
Kiiska Ikraan Tahliil Faarax oo noqdey qadiyad heer qaran iyo mid caalami ah ayaa soo jiitay indhaha caalamka iyadda oo diblumaasiyiinta fadhigoodu yahay Xalane ay ka digeen in uu saameeyo doorashooyinka wallow ay adkeeyeen in galdacwdeedkan uu kusoo dhamaado qaab daahfuran.